Eeg CRM Pricing - Qaado Awooda Ganacsiga ee 80% Kharash Yar
Hadda bilow, hadda dooro qorshaha dambe
Isku day inaad shirkadda Xubnaha bilaashka ah ee maalmaha 14, oo leh dhammaan muuqaalada. Looma baahna kaarka deynta.
Buuxin Sanadkiiba Lacagtii Bil kasta
10 + Isticmaalayaasha? Qaado qiime caadi ah
$ 12 / isticmaalaha bishiiba
Rs.850 / isticmaalaha bishiiba
Buuxin Sanadkiiba (Xoogaa 33%)
$ 18 / isticmaalaha bishiiba
Rs.1275 / isticmaalaha bishiiba
Lacagtii Bil kasta
(Save 33% oo leh qorshe sanadeed)
Tilmaamaha Dhibaatada Badan
2 - habka email-ka
Email-xadka aan xadidneyn, xitaa Gmail
Xasuuso haddii jawaab la'aan
Kantaroolka cidda arki karta
Isku-dubarid barnaamijyada 100s
Caawinta ayaa laga helaa website-ka
$ 27 / isticmaalaha bishiiba
Rs.1925 / isticmaalaha bishiiba
Dashboards & 20 + warbixinnada caadiga ah
Warbixinno gaar ah, xitaa goobaha gaarka ah
Noocyada kala duwan ee jaantusyada
Aragtida Hierarchy oo ku salaysan xogta
$ 24 / isticmaalaha bishiiba
Rs.1500 / isticmaalaha bishiiba
$ 36 / isticmaalaha bishiiba
Rs.2484 / isticmaalaha bishiiba
Qorshayaasha / qorshayaasha la qorsheeyay
Isbeddelada baaxadda / ficilada
Abuur caqli geddig ah (iyadoon lahayn wax koodh!) Si loo baabi'iyo geeddi-socodka ganacsiga
Calaamadaha jarista / digniinta
Si toos ah u samee hawlaha / diiwaanada kale
$ 33 / isticmaalaha bishiiba
Rs.2277 / isticmaalaha bishiiba
$ 49 / isticmaalaha bishiiba
Rs.3380 / isticmaalaha bishiiba
Miisaska Qaas ah
Qalabaynta horumarsan ee warshadahaaga
Barnaamijyada gaarka ah ee lagu maamulo hababka kale
Soo sheegida & Meelaynta Miisaanka Mushaararka
Abuur dufan xirfad leh oo ku saabsan 1 guji
Naqshadeeysi Muunad ah oo la beddeli karo
Amarka iibinta iyo soo iibsiga
Maareynta Territoriyaadka / Xeerarka ku saleysan xogta
Bilaw Dhibaatadaada Bilaash hadda
14 Maalmo Bilaash ah oo Bilaash ah. Looma baahna Kaarka Deynta.
Maxay tahay sababta aan u doorto shirkad?
Si buuxda u habboon ee loogu talagalay warshadahaaga
CompanyHub waa mid ka mid ah CRM-ka ugu habboon ee loogu talagalay SMBs. Iyadoo la raacayo jiiditaanka fudud waxaad:
Iskudhin goobaha, salka, filtarrada iwm.
Raadi oo abaabul wax kasta oo leh jadwallo caadifad ah sida lacagaha, Kursiga, Guryaha iwm.
Isku xir wax kasta oo aad aragto aragtida Darajada 360.
Falanqee wax kasta oo warbixinno ah
UTrons - Automatate Your Workflow kula Drag-Drop
CompanyHub's UTrons ayaa kuu oggolaanaya inaad baabi'iso waxqabad adiga oo sameynaaya shaxda socodka. Tusaale ahaan:
U samee shaqada marka isbedelka wareega wareega
Si toos ah u samee heshiis markii shirkad la abuuro
Si toos ah u cusbooneysii heshiisyada
Si toos ah u dir waraaqaha dhalashada / taxane waraaqaha / xasuusinta taariikhda wakhtiga
Easy sida Excel CRM
Kooxdaada ayaa dhab ahaantii Isticmaali doonta
Excel sida muuqaalka oo kuu ogolaanaya in aad sameyso waxyaabo badan oo ka mid ah bogga hal-abuurka, abuuro nasteexo, unugyo, diro boosto, ku daro xusuus / hawl / wadahadal iwm.
Ammaanka - Si buuxda u xakameyn kara cidda
Waxaad si sahlan u xakameyn kartaa cidda ay arki karto diiwaannada iyo meelaha ay ka mid yihiin.
Taageerida Heerka Qaboobaha
Kooxdayada taageerada ayaa lagu qiimeeyay 100% G2Crowd sababtoo ah waxaan had iyo jeer raacnaa meylka dheeriga ah si ay u caawiyaan macaamiisheenna.
Ka hel awoodda shirkadda CRMs iyadoon loo eegin kakanaanta iyo kharashka.
Weli Su'aalo La Qabo?
Maxaad uga iibsataa? Maxaa ka dhigaya mid gaar ah?
Waxaanu ka shaqeynay xarun CRM loogu talagalay 8 + sano. Tani waxay na siisay fahamka baahiyaha shirkadaha kala duwan. Waxaan sidoo kale isticmaalnay CRMs badan oo ah kooxaheena iibka ah. Tani waxay naga dhigtay inaan ogaanno in badi CRMs ay yihiin mid aad u yar ama aad u adag. Sidoo kale, iyaga oo aan haysan qalabka iibka lagama maarmaanka ah sida email-ka raadinta, ka warbixinta iwm. Daahir, waxaan go'aansanay inaan naftaada dhisno. Maadaama aan nahay sidoo kale shirkad aad u mashquulsan, waxaan awoodnay inaan dhisi karno dhab ah oo aad u fudud oo awood leh oo CRM ah oo ka caawiya shirkadaha inay koraan.
Natiijo noocee ah ayaan ka heli doonaa tan?
CompanyHub wuxuu kaa caawinayaa hababka 3. 1. Waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u kobciso hogaankaaga oo aad u beddesho raadad dheeraad ah. Sidaa darteed sii kordhaya iibkaaga. 2. Waxay kordhin doontaa waxtarka kooxdaada. Wakiiladaadu waxay badbaadin karaan saacado badan waxayna isticmaalaan si ay xoogga saaraan iibka. 3. Waxaad heli doontaa aragti buuxa. Waxaad awoodi doontaa inaad la socoto dhammaan hogaamiyaasha, wada sheekeysiga, waxay ku heshiiyaan meel dhexe. Waxa kale oo aad falanqeyn kartaa wax kasta oo leh warbixinno xoog leh. Markaa waxaad heleysaa wax kasta oo aad ku korin karto ganacsigaaga.
Ma jiraa qandaraasyo dheer?
Waxaan kalsooni ku qabnaa in CompanyHub ay caddaynayso qiimaha maalmo yar gudahood. Taasi waa sababta aan u hayno heshiisyo waqti dheer ah oo aad ka doorbidid qorshayaasha bil kasta illaa bilaha. Waad daalisnaan kartaa, sanad walba bixisaa qiimo dhimis dheeraad ah.
Maxaa ku jira wicitaanka tababarka?
Wacitaanka Tababarka, mid ka mid ah lataliyeyaashayada CRM waxay kugu soo gaari doonaan adiga iyo waxay fahmi doonaan shuruudahaaga. Ka dib markaad fahamto shuruudaha ay kuu hagi doonaan si aad u hesho ugu wanaagsan ee ka mid ah xisaabtaada shirkadda CompanyHub CRM. Waxaad heli doontaa demo sida baahidaada. Waxaad sidoo kale ku lug yeelan kartaa kooxdaada demo.
Sideen ugu bandhigaa kooxdayda?
Waxaad si toos ah ugu yeeri kartaa xisaabtaada xisaabta CompanyHub si ay u bilaabaan isticmaalka. CompanyHub waa mid aad u fudud in la isticmaalo waxaananu hubineynaa in kooxdaada ay bilaabi doonto inaad adeegsato maalinta 1. Si kastaba ha noqotee haddii ay jiraan wax su'aalo ah, adiga / kooxdaada ayaa la xiriiri kara kooxdayada taageerada waxayna ku sii wadi karaan hanaan kale.
Ma waxaad u qalantaa GDPR?
Waan ognahay inay tahay shabakad duurjoogta ah oo aan qiimeeyno macaamiisheena doorashada si ay ugu tiirsato shirkadda CompanyHub dhamaan macluumaadka macaamiisha. Si ay u hoggaansamaan shirkadan shirkadu waxay si buuxda u waafaqsan tahay GDPR.
Sidee bay amaan u tahay xogtayda?
Nabadgelyada xogta waa arrin aan si dhab ah u qaadaneyno shirkadda CompanyHub. Xaqiiqdii waxaanu ku siinnaa heerka ganacsiga heerka ammaanka 5: 1. Macluumaadka kala duwan ee macmiil kasta 2. Xawilaadda xogta adoo isticmaalaya SSL sida bangiyada 3. AWS servers, oo ay isticmaalaan goobo hogaaminaya 4. Xajinta heerka kaydka 5. Amniga heerka goobta
Inaad dirto email badan oo cinwaanka e-maylka loo isticmaali doono?
Si ka duwan E-mail-gareentooyinka waxaan isticmaalnaa cinwaankaaga & cinwaankaaga u gaarka ah si aad u soo dirto emeelka buluugga ah (hal mid by). Sidaa darteed fursadaha emailkaaga ee aad u geli karto sanduuqa asaasiga ah ee ugu muhiimsan ee aad filayso.
Immisa emails ayaan diri karaa shirkadda CompanyHub?
Bixiyeyaasha emailka intooda badan waxay leeyihiin xaddidan maalinle ah, taas oo inta badan ku jirta 100s. Fadlan calaamadee xayeysiiska bixiyahaaga maalin kasta si aad u dirto diritaanka. CompanyHub waxay u ogolaataa 1000 maalintiiba.
Xaggee xogtayda ku jirta?
Waxaan isticmaalnaa AWS server, kaas oo sidoo kale loo isticmaalo badi goobaha ugu muhiimsan.
Tani ma la wadaagi doonaa nidaamyada kale?
Iyada oo xulashooyin kala duwan oo kala duwan sida Zapier, PieSync iyo API, CompanyHub waxaa lagu dari karaa dhammaan codsiga caanka ah.
Sidee u adagtahay in la bilaabo shirkadda CompanyHub?
Isticmaalka CompanyHub wuxuu u fudud yahay sidii hore. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa sameynta xisaabtaada oo aad bilowdo. Haddii ay dhacdo wax shaki ama weydiimo ah waxaad mar walba gaari kartaa taageeradaada Macaamiisha.
Waa maxay UTron iyo sidee u shaqaysaa?
UTron waa bangiga iibka shakhsiyeed kaas oo kaa caawin doona inaad baabuurto dhammaan hawlaha caajiska ah. Iyada oo kaliya dhibic oo gujiso waxaad abuuri kartaa UTrons-gaaga si aad u baabi'iso ku dhowaad dhammaan geeddi-socodka ganacsiga adiga oo aan lahayn hal xaraf.
Shirkadda shirkadu ma ka shaqeysaa qalabka gacanta?
Waxaan si xoogan u aaminsanahay in ay tahay aduun moobiil ah oo aan horey u jirin mana dooneyno inaan xakameyno iibsadaha macaamiisheena miiska. Waa maxay sababta shirkadda CompanyHub aad u sahlan tahay noocyadda mobile-ka ee Android iyo iyo macruufka, kuwaas oo loogu talagalay "marwalba socdaalka" dadka iibinta. Sidaa darteed wax kasta oo aad u baahan tahay waa uun tuubo.
Waxaan leenahay xafiisyadayda meelo kala duwan, miyay shaqeyneysaa?
Haa, CompanyHub waxay noqon doontaa xalka ugu fiican adiga haddii aad leedahay xafiisyo xafiisyada meelo kala duwan. Iyadoo shirkadda shirkadda Hub waxaad go'aamin kartaa cidda isticmaalaysa arki kara macluumaadka. Sidoo kale dhammaan kooxahaada ayaa si fudud u wada shaqeyn kara hal meel marka aad hesho aragti buuxa. Waxaad kaloo abuuri kartaa warbixinno macquul ah daqiiqado yar gudahood.
Ma jiri doontaa qof haddii aanu u baahannahay caawimo si loo furo xisaabta?
Haa, kooxdayada taageeradu waxay noqon doontaa farriin keliya markaad u baahato. Mar kasta oo adiga ama kooxdaadu ay shaki kaaga jiraan ama su'aaluhu kaliya farriin / email noo soo diraan wayna ku farxi doonaan inay ku caawiyaan. Kooxda shirkadda BTW waxay ahayd shirkad kaliya oo heshay 100% qiyaasta ku qanacsanaanta ee G2 Crowd's waxqabadka sareeya ee CRM Spring.
Kooxdayada Taageeradu waxay jeceshahay inay caawimaan Macaamiisheena
Macaamiishayadu waxay muujiyeen Jacaylka Too By Rating Them 100% On G2Crowd!
Caawinta Kootada Xisaabta
Demoqraadiyada shakhsi ahaaneed